ह्वीलचियरमा घिस्रिँदै उपचारको याचना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ह्वीलचियरमा घिस्रिँदै उपचारको याचना
२०७५ श्रावण १६, बुधबार ११:२५ गते
रत्ननगर । ‘चार वर्षअघि घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर मेरूदण्ड नै भाँचियो, वीर अस्पतालमा उपचार गरेर घर फर्किएँ । एक वर्षदेखि मेरूदण्डमा क्यान्सर देखिएको छ, उपचारका लागि सहयोग माग्दै हिँडेको छु’, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका-२, अत्रौलीका ४८ वर्षीय ओम माझी आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछन् ।
उनी यतिबेला साथीको सहायतामा ह्वीलचियरमा घिसिँ्रदै सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । अत्रौली, लालभित्तीका सुकुमबासी बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका माझी चार दिनदेखि यतिबेला नारायणगढको पोखरा बसपार्कमा रहँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘के गर्नु हजुर, डाक्टरले उपचार खर्च १६ लाख लाग्छ भनेका छन्, सुकुमबासी अवस्थाको मैले कसरी त्यति पैसा जुटाउनु !’
मजदुरी गर्दै श्रीमती सिर्जना र चार छोराछोरीको पालनपोषण गर्दै आएका माझी रुखबाट खसेपछि परिवारकै बिचल्ली भएको बताउँछन् । ‘के गर्ने, परिवारका लागि भने पनि बाँच्नै प¥यो, उपचार गर्न पाए माछा मारेर र मजदुरी गरेर पनि जहान केटाकेटी पाल्ने थिएँ ।’
उनी एक वर्षअघिदेखि सहयोग माग्दै हिँडिरहेका छन् । यही साउन ४ गतेदेखि मकवानपुर फापरबारीका कान्छाराम सिन्ताङले साथ दिएका छन् । सिन्ताङ काठमाडौँमा मजदुरी गर्ने क्रममा माझीसँग साथी बनेका थिए । साथीको यस्तो अवस्था हुँदा सकेको सहयोग गरुँ भनेर सँगै हिँडेको सिन्ताङ बताउँछन् ।
उनले धेरैचोटि हरिवन नगरपालिकामा निवेदन दिए । तर, नगरपालिकाले बजेट छैन, माथिबाट आउँछ अनि विचार गरौँला भनेर फर्काइदियो । उनी भन्छन्, ‘आफ्नै नगरपालिका हो भनेर धेरै आशा लिएर गएको थिएँ, कतिलाई सहयोग गर्नु, यस्ता मान्छे दिनहुँ आउँछन् भनेर वचन लगाए, अनि खिन्न भएर फर्किएँ ।’
गाविसबाट नगरपालिका बने पनि आफूजस्ता गरिब र सुकुमबासीका लागि कुनै सहयोग नभएको उनले बताए । ‘बरू, कतारमा बस्ने लालबन्दीका पेमा लामाले मेरो अवस्था देखेर ३० हजार सहयोग गर्नुभयो, तर आफ्नै ठाउँमा रूखो वचन सुन्नुप¥यो ।’
उनले अहिलेसम्म मागेरै दुई लाख रूपैयाँ संकलन भएको सुनाए । शरीरमा पिसाबथैली जोडेर ह्वीलचियरमा बस्ने उनी हेर्दा निरोगीजस्ता लाग्छन् । तर, उनको पीडा उनलाई बाहेक कसैलाई थाहा छैन । उनी सधैँ औषधि खाएर क्यान्सरसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् ।
उनको उपचारमा संलग्न वीर अस्पतालका डा. गोपाल केसीले खर्चको जोहो गर्न सके उपचार सम्भव रहेको बताएपछि उनी देश दौडाहामा हिँडेका हुन् । ‘थाहा छैन कहाँ पुगिन्छ, घामपानी नभनी उपचार खर्च जुटाउन हिँडिरहेको छु । मनकारी मान्छेहरु भेटिएलान्, सबैको ससानो सहयोग पनि मेरा लागि ठूलो छ’, उनी भन्छन् ।
एउटै कुराको याचना कति गर्ने, कसलाई भन्ने ? सबैलाई सुनाउने गरी उनले एउटा स्पिकरमा पेन डूाइभ राखेर रेकर्ड गरिएको सहयोगको याचना बजाउँछन् । वरिपरि मान्छेको भीड लागेका बेला त्यही स्पिकरले सुनाउँछ उनको पीडा । अनि, संकलन हुन्छ दुई(चार सय रूपैयाँ ।
उनी उपचारका लागि कहाँ धाएनन् ? गरिबको उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्ने सुनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पुगे । तर, मन्त्रालयले केही सस्ता औषधिमात्र निःशुल्क हुन्छ भनेर फर्काइदिएको उनी बताउँछन् । सरकारले गरिबलाई एउटा अपाङ्ग परिचयपत्र थमाएर झारा टार्ने काम गरेको उनी बताउँछन् ।
उनले सहयोग गर्न चाहने दातालाई सीधा सम्पर्क गरेर आफ्नो जीवन बचाइदिन अपिल गरेका छन् । उनको मोबाइल नम्बर ९८४०७२०४३० मा सम्पर्क गरी यथाशक्य सहयोग गरिदिन उनले याचना गरेका छन् ।